27 Okwu Jehova wee ruo m ntị ọzọ, sị:
2 “Ma gị onwe gị, nwa nke mmadụ, bụọ abụ iru uju+ banyere Taya,
3 sị Taya,
“‘Gị onye bi n’ọnụ ọnụ oké osimiri,+ nwaanyị nke ya na ndị dị iche iche ndị si n’ọtụtụ agwaetiti na-azụkọ ahịa,+ nke a bụ ihe Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru: “Taya, gị onwe gị sịrị, ‘Ezuru m okè n’ịma mma.’+
4 Ókèala gị dị n’etiti oké osimiri.+ Ndị na-ewu gị emewo ka mma ị mara zuo okè.+
5 Ha si n’osisi junipa nke si Sina+ nweta osisi niile e ji rụọ gị. Ha ji osisi sida nke si Lebanọn+ rụọ osisi ákwà ụgbọ mmiri nke dị n’elu gị.
6 Ọ bụkwa oké osisi ndị si na Beshan ka ha ji rụọ ụmara e ji akwọ gị. Ha ji ọdụ́ a kwụnyere n’osisi saịpres nke si n’agwaetiti Kitim+ rụọ ihu gị.
7 Ákwà gị a gbasara agbasa bụ linin tụrụ àgwà nke si n’Ijipt,+ ka o wee bụrụ ákwà ụgbọ mmiri nke dị n’elu gị. Ákwà na-acha anụnụ anụnụ+ na ákwà e sijiri odo odo+ nke si n’agwaetiti Elaịsha+ ka e ji kpuchie elu gị.
8 “‘“Ndị na-akwọ gị bụ ndị bi na Saịdọn+ na Avad.+ Gị Taya, ndị gị, bụ́ ndị nwere nkà,+ nọ n’ime gị; ọ bụ ha bụ ndị na-akwọ gị dị ka ụgbọ.+
9 Ọbụna ndị okenye Gibal+ na ndị ya, bụ́ ndị nwere nkà, nọ n’ime gị dị ka ndị na-arachi oghere ndị dị na gị.+ Ụgbọ mmiri niile nke oké osimiri na ndị ọrụ ha nọ n’ime gị, ka ha ree ngwá ahịa ha.
10 Ndị Peshia+ na ndị Ludim+ na ndị Pọt+—ha so n’ìgwè ndị agha gị, ndị na-alụrụ gị agha. Ha kokwasịrị ọta na okpu agha ha ná mgbidi gị.+ Ọ bụ ha mere ka ị maa mma.
11 Ụmụ Avad,+ tinyere ndị agha gị, nọ gburugburu n’elu mgbidi gị, ọ bụkwa ndị ikom obi siri ike nọ n’ụlọ elu gị. Ọta ha nke dị okirikiri ka ha kokwasịrị ná mgbidi gị gbaa gburugburu.+ Ọ bụ ha mere ka mma ị mara zuo okè.
12 “‘“Tashish+ bụ onye ahịa gị n’ihi ụdị ihe niile dị oké ọnụ ahịa ndị dị ọtụtụ.+ E ji ngwá ahịa gị niile gbanwere ọlaọcha, ígwè, gbamgbam na opu ya.+
13 Jevan,+ Tubal+ na Mishek+ bụ ndị ahịa gị. E ji ngwá ahịa gị gbanwere mkpụrụ obi ụmụ mmadụ+ na ihe e ji ọla kọpa mee.
14 E ji ịnyịnya nkịtị na ịnyịnya agha na ịnyịnya ibu ndị si n’ụlọ Togama+ gbanwere ngwá ahịa gị.
15 Ụmụ Didan+ bụ ndị ahịa gị; ọtụtụ agwaetiti bụ ndị na-erere gị ahịa; ọdụ́+ na osisi eboni bụ onyinye ha ji kwụọ gị ụgwọ.
16 Idọm bụ onye ahịa gị n’ihi ọtụtụ ihe ị na-emepụta. E ji ngwá ahịa gị gbanwere nkume tọkwọiz,+ ákwà e sijiri odo odo na ákwà tụrụ àgwà na ezigbo ákwà na nkume kọral na rubi.
17 “‘“Juda na ala Izrel bụkwa ndị ahịa gị. E jikwa ọka wit+ nke Minit+ na nri pụrụ iche na mmanụ aṅụ+ na mmanụ na bọlsọm+ gbanwere ngwá ahịa gị.+
18 “‘“Damaskọs+ bụ onye ahịa gị n’ihi ọtụtụ ihe ị na-emepụta, n’ihi ihe gị niile dị oké ọnụ ahịa ndị dị ọtụtụ, tinyere mmanya+ Helbọn na ajị anụ na-acha nchara nchara.
19 Vidan na Jevan nke si Yuzal ji ihe ha dị iche iche gbanwere ngwá ahịa gị. Ngwá ahịa gị bụ ihe ndị e ji ígwè kpụọ, osisi kashịa na ahịhịa na-esi ísì ụtọ.+
20 Didan+ bụ onye na-azụ gị ákwà e kwere ekwe e ji anọkwasị n’elu ịnyịnya.
21 Ndị Arab+ na ndị isi Kida+ niile bụ ndị na-erere gị ahịa. Ha na-erere gị ụmụ ebule na ebule na mkpi.+
22 Ndị ahịa Shiba+ na Rema+ bụ ndị ahịa gị; e ji ngwá ahịa gị gbanwere ụdị ihe otite ọma niile na-esi ísì ụtọ nakwa ụdị nkume niile dị oké ọnụ ahịa na ọlaedo.+
23 Heran+ na Kane na Iden,+ ndị ahịa Shiba,+ Ashọ+ na Kilmad, bụ ndị ahịa gị.
24 Ha bụ ndị na-erere gị uwe mara mma n’ebe ị na-ere ahịa. Ha na-erekwara gị uwe e ji ákwà na-acha anụnụ anụnụ na ákwà tụrụ àgwà mee nakwa kapet tụrụ àgwà abụọ, na ụdọ a tụrụ atụ, nke e mekwara ka o sie ike.
25 “‘“Ọ bụ ụgbọ mmiri Tashish+ na-eburu gị ngwá ahịa gị, i wee jupụta ná ngwá ahịa, dịkwa ebube n’etiti oké osimiri.+
26 “‘“Ọ bụ ná nnukwu mmiri ka ndị na-akwọ gị kwọrutere gị.+ Ifufe nke si n’ebe ọwụwa anyanwụ etikawo gị n’etiti oké osimiri.+
27 Ihe gị ndị dị oké ọnụ ahịa na ihe ị kwakọbara,+ bụ́ ngwá ahịa gị,+ ndị na-arụ ọrụ n’ime gị na ndị na-akwọ gị,+ ndị na-arachi oghere ndị dị na gị+ na ndị na-erere gị ngwá ahịa gị nakwa ndị niile na-alụrụ gị agha,+ bụ́ ndị nọ n’ime gị nakwa ndị niile so gị, ndị nọ n’ime gị,—ha ga-adaba n’etiti oké osimiri n’ụbọchị ị ga-ada.+
28 “‘“Mgbe a nụrụ mkpu ákwá nke ndị na-akwọ gị, obodo dị n’ụsọ osimiri ga-ama jijiji.+
29 Ndị niile bu ụmara ụgbọ, bụ́ ndị ọrụ ụgbọ mmiri, ndị niile na-akwọ ụgbọ mmiri n’elu oké osimiri, ga-esi n’ụgbọ ha rịtuo; n’elu ala ka ha ga-eguzo.+
30 Ha ga-eti mkpu n’ihi gị, kwaakwa ákwá nke ukwuu.+ Ha ga-ekpokwasịkwa ájá n’isi ha.+ Ha ga-atụrụ onwe ha ná ntụ.+
31 Ha ga-eme onwe ha ndị isi nkwọcha n’ihi gị,+ keekwa ákwà iru uju n’úkwù+ ma kwaara gị ákwá n’ihi ihe na-ewute ha ná mkpụrụ obi,+ na-akwa ákwá arịrị.
32 Mgbe ha na-akwara gị ákwá arịrị, ha ga-abụrụ gị abụ iru uju,+ sị,
“‘“‘Ònye dị ka Taya,+ bụ́ onye a laworo n’iyi n’etiti oké osimiri?+
33 Mgbe ngwá ahịa gị+ si n’oké osimiri pụta,+ i mere ka afọ ju ọtụtụ ndị.+ I ji ihe gị ndị dị oké ọnụ ahịa na ngwá ahịa gị mee ka ndị eze ụwa baa ọgaranya.+
34 Ugbu a, oké osimiri etikasiwo gị, n’ogbu mmiri.+ Ngwá ahịa gị na ndị niile so gị+ alawo n’iyi n’ime gị.
35 Ndị niile bi n’agwaetiti+—ha ga-ekporopụ anya na-ele gị, ndị eze ha ga-amakwa jijiji n’ụjọ.+ Ihu ndị mmadụ ga-agbarụ.+
36 Ndị ahịa n’etiti ndị dị iche iche ga-afụ mkpọrọhịhị n’ihi gị.+ Ihe ụjọ mberede ga-abịakwasị gị, ị gaghị adịkwa ọzọ ruo mgbe ebighị ebi.’”’”+